Maalin-ka-maalin, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland (WKG)
Sababta oo ah isaga laftiisu wuxuu yidhi: "Runtii anigu ma doonayo inaan gacantayda kaa qaado, runtina ma doonayo inaan ku tago" (Cibraaniga 13, 5 ZUB).
Maxaan qabannaa haddii aanaannaan jidkeenna arki karin? Suuragal maahan suurtagal in nolosha la maro iyada oo aan jirin walwal iyo dhibaatooyin nolosha la imanaya. Mararka qaarkood kuwan way adag tahay in loo dulqaato. Nolosha, waxay umuuqataa, inay tahay mid ku meel gaadh ah cadaalad daro. Maxay sidaa u tahay? Waxaan jeclaan laheyn inaan ogaano taas. Waxaan dhib ku qabnaa kuwa aan la saadaalin karin waxaanan la yaabanahay waxa ay taasi ka dhigan tahay. In kasta oo aysan tani wax cusub ahayn, haddana taariikhda aadanaha waxaa ka buuxa cabashooyin, laakiin waxaas oo dhan waa lagu dhergi karaa waqtigaan ...
Kaniisadda ayaa ah jidhkiisa oo isagu ku dhex noolaada iyada oo dhan. Waa kan wax walba iyo qof walba hortiisa buuxiya (Efesos 1:23).
Sannadkii hore waxaan xasuustay kuwa ku bixiyay waxtarka ugu weyn ee dagaalka si loo hubiyo jiritaankeena qaran ahaan. Xusuusnadu waa wanaagsan tahay. Xaqiiqdii, waxay umuuqataa inay tahay mid ka mid ah ereyada Ilaah ugu jecel yahay maxaa yeelay marar badan ayuu u adeegsadaa. Wuxuu had iyo jeer ina xusuusiyaa in aan ka warhayno xididdada iyo mustaqbalkeenna. Waxay ina xusuusineysaa qofka uu yahay iyo inta uu inaga danaynayo; wuxuu rabaa in aan ogaano cida aan nahay iyo in ayna jirin sabab ...
Mar labaad iyo marar badan, Ilaah wuxuu kula hadlay awowayaasheen siyaabo kala duwan nebiyadii hore xitaa waagii ina horreeyey. Laakiin hadda, waayadan dambe, Ilaah wuxuu nagula hadlay wiilkiisa. Isaga isagaa abuuray xaggiisa cirka iyo dhulka, isaguna isagaa u adeegsaday waxkasta oo dhaxlaya. Wiilku wuxuu muujinayaa ammaanta aabihiis, maxaa yeelay isagu guud ahaanba waa suuradda Ilaah (Cibraaniyada 1,1: 3 HFA).
Saynisyahannada Bulshadu waxay isticmaalaan ereyo ay ka mid yihiin "casri", "post-casri" ama xitaa "post-post-casri ah" si loogu sharraxo waqtiga aan ku nool nahay. Waxay sidoo kale ku talinayaan farsamooyin kala duwan si ...